30-ka Habeen Salaad ee Salaadda QODOBADA LAGU SAMEEYO
Bogga ugu weyn Dhibcaha salaadda 30 Habeenkii Salaadda Saqda dhexe
11 Waayo, Rabbiga Ilaaha ahu waxa weeye qorrax iyo gaashaan, Rabbigu wax wanaagsan kalama hadhi doono kuwa si qumman u socda.
The Saqda dhexe saacaddu waa waqtiga ugu waxtarka badan ee wejiga Ilaah la doono. Waxay ahayd saqbadhkii markay paul iyo Silas ku tukadeen meesha ay ka baxayaan addoonsiga, Falimaha Rasuullada 16:25, waxay ahayd habeenbadhkii in peter lasii daayay intay kaniisaddu tukanayeen, Falimaha Rasuullada 12: 6-19, Matayos 13:25 wuxuu inoo sheegayaa in inta dadku seexdaan , cadowgu wuxuu beeray gocondho. Waa inaan ka faa'iideysanaa saacadaha saqda dhexe si aan nafteena ugu barinno addoonsiga. Maanta waxaan fiirineynaa 30 bar oo salaadda saqda dhexe ah horumar dhaqaale. Waa inaan fahanno in ku ducaysiga horumar dhaqaale ay muhiimad weyn leedahay. Waa run inaadan taajir ku noqon doonin adigoo tukanaya kaliya maalinta oo dhan adigoon shaqeynin, laakiin markaan tukano, waxaan hoos udhignaa awooda sare si aan uga caawino dadaalkeena dabiiciga ah. Salaaddu waxay keentaa xoogagga Eebbe inay naga caawiyaan halgankayaga dhaqaale ee nolosha. Sidoo kale markaan tukano, jacaylka ilaahyada ayaa qalbiyadeena buuxiya sidaas darteedna waxay ku adkeyneysaa jacaylka lacagta inay nolosheena wasakheeyaan
Qodobbada salaadda saqda dhexe ee loogu talagalay furfurnaanta maaliyaddu waxay kuu furi doontaa albaabyo maaliyadeed, sidaad ugu duceysatid iimaanka, adigoo sare u qaadaya saacadaha saqda dhexe, waxaad arki doontaa xoogga Ilaah oo kor u kacaya si uu kuugu murugoodo shaqadaada. Ilaah wuxuu keeni doonaa waxkasta oo ganacsi oo sharci ah inaad sameyso inaad barwaaqaysato, xitaa dhacdooyinka duruufaha aan dhamaadka lahayn ayaa kuu raalli gelin doona Rabbigu wuxuu gacantiisa midig ku taagnaan doonaa, wuxuuna kaa dhigi doonaa madaxaaga faa'iidadaada ah. Sidaad u tukanaysid qodobbada salaadda, Sayidku wuxuu ku siin doonaa fikrado cusub oo kaa dhigi doona inaad tahay qof caalami ah oo sidaas kuu adeegsan doona inaad adduunka ka dhigto meel ka sii wanaagsan. Waxaan aaminsanahay maanta in salaaddani ay kuu horseedi doonto guul darrooyinkaaga dhaqaale magaca Ciise.
1. Waxaan amar ku siinayaa carqalada kasta oo jinniyoda in mashaqadeyda dhaqaale in gabi ahaanba la curyaamiyo, magaca Ciise.
2. Meel kasta ha ku keydiyo xisaabaadka sheydaanka ah ee sheydaanka ah ee ilaaliya dhaqaalahayga waxaan amar ku bixinayaa in dhaqaalahayga oo dhan lasii daayo !!!, magaca Ciise.
3. Waxaan ku xirayaa nin kasta oo xoog leh oo istaaga aniga iyo horumarkayga maaliyadeed, magaca Ciise.
4. Waxaan hantideyda oo dhan ka qaatay gacanta cadowga, magaca Ciise.
5. Waxaan ka jabayaa oo iska fogeeya habaar kasta oo addoonsiga dhaqaale iyo saboolnimada ah, magaca Ciise.
6. Waxaan iska daayaa axdi walba oo miyir qaba iyo miyir miidhan ah oo aan la galno ruuxa faqriga, magaca Ciise.
7. Ilaahey ha sara kiciyo oo cadaw kasta ha noqotee haloo kala firdhiyo, magaca Ciise.
8. Sayidow, dib u soo celi dhammaan maalmahayga iyo dadaalkayga oo waxaad ugu beddeshaa haybadayda dhaqaale, magaca Ciise.
9. Ruuxa nimcadu ha ii dulqaado meelkasta oo aan ku tago magaca Ciise.
10. Aabe, waxaan kaa codsanayaa, magaca Ciise, inaad u dirto jinniyo u adeegaya si aad iigu xiriiriso kaaliyeyaasha dhaqaale ee magaca Ciise.
11. Raggu ha i barakeeyo dhaqaale ahaan meel kastoo aan aado, magaca Ciise.
12. Dhaqaalahayga waxaan ka sii daayaa silica haraaga dhaqaale, ee magaca Ciise.
13. Waxaan u furayaa malaa'igo, magaca weyn ee Ciise, si ay u tagaan oo aan ugu abuuro wanaag xagga maaliyaddayda.
14. Dhibaatooyinka dhaqaale ee taagan oo dhan ha laga joojiyo, magaca Ciise.
15. Magacayga iyo kuwa reerkaygaba waan ka saarayaa kitaabka dhicitaanka, oo magaca Ciise.
16. Ruuxa Quduuska ah, ku noqo la-hawlgaladeyda sare ee maaliyaddayda.
17. Wax kasta oo wanaagsan oo hadda ka hor imanaya kala-go’ahaygii dhaqaale wuxuu bilaabmayaa inuu hadda ku soo qulqulo !!! magaca xoog leh ee Ciise.
18. Waxaan diidaa ruux walba oo dulli dhaqaale iyo xishood, magaca Ciise.
19. Aabe, xayiraad kasta oo ku baxa dhaqaalahayga, magaca weyn ee Ciise.
20. Dhaqaalahaygu ha aad u kululaado oo aan wax uga qabto tuugga iyo macaamiisha jinniyo, ee magaca Ciise.
21. U oggolow awoodda magnetic ruuxa ee soo jiidata oo xajista maalgeliyadeyda, magaca Ciise.
22. Dhaqaalahayga waxaan ka sii daayaa saameynta, xakameynta iyo xakameynta sharkabka qoyska, magaca Ciise.
23. Dhammaan malaa'igta shaydaaniga ah ee shaydaanka iga fogeeya oo iga fogeeya ducooyinkaas oo dhan, magaca Ciise.
24. U oggolow saamaynta xun ee lacag kasta oo qalaad ah oo aan helay ama taabtay ha lagu go'doomiyo, magaca Ciise.
25. Eebow i bar sirta rabbaaniga ah ee barwaaqada.
26. Farxadda cadowga ee noloshayda ha ku beddelo murugo, magaca Ciise.
27. Dhammaan barakeysankeyga lagu haystay maxalli ahaan ama caalami ahaanba ha layga sii daayo, magaca Ciise.
28. Waxaan xidhaa dhamaan xoogaga 'barwaaqada ciidamada', magaca Ciise.
29. Dhaqaalahaygu ha aad u kululaado, si xoog kasta oo shar ah uu u fadhiisto, magaca Ciise.
30. Aabe waan kuugu mahadcelinayaa inaad iga dhigtay nin / naag hodan ah oo magaca Ciise.
article Previous30 Tilmaamaha salaadda ee xaaladaha aan macquul ahayn
Next article30 tukasho oo duco oo loogu talagalay dhammaan wareegga wareega
Nicola Clarke-Cuffe Nofeembar 7, 2019 saacadu markay tahay 3:36 pm
La soco howlaha wanaagsan. Ilaah ha barakeeyo!
Maame Sarpong Nofeembar 18, 2019 saacadu markay tahay 12:24
Ilaahay ha idiin barakeeyo
Soo gal Diseembar 4, 2019 saacadu markay ahayd 2:30 pm
KAA AKHRISO Ninkii Eebbe.
Tallaalka Wung Diseembar 17, 2019 saacadu markay tahay 12:27
Wadooyinka Felecia Janaayo 5, 2020 Saacaddu markay ahayd 3:59 am
Aad ayaad u mahadsantahay MOG, dhamaan salaadahaaga salaadda waa awood.
Mariana Cacovean Maarso 1, 2020 saacadu markay tahay 1:11 pm
Mariana Cacovean Maarso 1, 2020 saacadu markay tahay 1:14 pm
Matthew Elesiro Maarso 19, 2020 saacadu markay tahay 6:54 pm
Salaadaha awoodda leh
Pamela Abriil 1, 2020 XXX: 9 pm
Aad baad ugu mahadsantahay salaadda dagaallada xoogga leh. Ilaahay ha kugu sii wado isticmaalka magaca Ciise.
Margret van de Laar Abriil 7, 2020 saacadu markay tahay 7:49 am
Waxaad ku jirtaa gevangenen ketenen los bidden en bevrijden.
Waad ku mahadsan tahay caawimaadda Ilaah ee aad ka heshay.
Beenta been abuur Margret😍❤️
Wadaadka Ikechukwu Chinedum Abriil 7, 2020 saacadu markay tahay 7:56 am
Ogheneovo Juun 27, 2020 Markay tahay 11:35 pm
Salaan, mudane fadlan iga caawi inaan u duceeyo horumar dhaqaale
kago lucresia Luulyo 29, 2020 saacadu markay ahayd 9:44 am
Waad ku mahadsantahay salaadda xoogga badan. Waxaan sii wadi doonaa ducada in albaabada u furnaato dhaqaale noloshayda kuwa aan jeclahay iyo gurigeyga aan ugu baahanahay horumar dhaqaale.
Nadia Abriil 11, 2020 saacadu markay tahay 5:25 am
Tani waa mid aad u xoog badan oo aad loo qadariyo. Waxaan ku duceysan doonaa qodobadan oo dhan saqda dhexe. Ilaah ha ku barakeeyo!
Debo Orekoya Abriil 23, 2020 saacadu markay tahay 1:22 am
Waad ku mahadsantahay salaadda Wadaadka. Noloshayda way barakeeyeen.
Cynthia Abriil 26, 2020 XXX: 4 pm
Ma jirtaa wado lagu dejiyo duco? Aad baan ugu duceeyay ducooyinkaaga 💞
chibueze evarlistus ogbonnaya Meey 7, 2020 saacaddu markay ahayd 7:40
Ducadaas waxaan idhi hadda waa inay ii furnaadaan albaabbo iiqurux badan oo weliba ducooyinkan waxay iga yeelinayaan inaan ka guuro xagga sharafta ilaa magaca ciise magaca Aamiin
chibueze evarlistus ogbonnaya Mee 8, 2020 XXX: 9 pm
Salaaddan waxaan idhi hadda waa inaan beddelaa sheekadayda si dhakhso leh magaca Ciise aamiin
Henry kelechi Mee 11, 2020 XXX: 11 pm
Wax walbana waa u rogayaan wanaaggayga aawadood oo ku jira magaca Rabbi Aamiin.
Godwin Meey 15, 2020 saacaddu markay ahayd 1:36
Faallo: Mahadsanid Sir, Waa La Igu Amray! Waxaan aaminsanahay in Albaabada Maaliyadeed ay furan yihiin hadda! Magaca Ciise
SONIA CADENA BUENO Mee 16, 2020 XXX: 5 pm
Oluwakemi Abimbola Meey 19, 2020 saacaddu markay ahayd 2:50
Hoogay! Tani way xoog badan tahay waana laygu duceeyay waana la ixtiraama salaadahan. Wax walbaa waxay ushaqeeyaan waxtarkooda hada laga bilaabo magaca Ciise, Aamiin. Aad baad u mahadsantahay salaadda.
Oluwakemi Abimbola Meey 19, 2020 saacaddu markay ahayd 3:03
Hoogay! Aad ayaan ugu faraxsanahay ugana mahadnaqay salaadahan. Wax walbaa waxay ushaqeeyaan waxaan jeclahay oo kujira magaca Ciise, Aamiin. Waad ku mahadsan tahay ninka Ilaah.
Kola Mee 24, 2020 XXX: 5 pm
Waan jeclahay qodobbada salaadda
Idoko mercillina Juun 17, 2020 X XXX: 10 am
Waad mahadsantahay mudane, ilaahay haku siiyeeyo xoogiisa
Alimi Samuel Abiodun Juun 24, 2020 X XXX: 2 am
Allaha ku barakeeyo sir.
Austin chomba Juun 30, 2020 Markay tahay 8:22 pm
habeen wanaagsan oo nin ilaah ah ilaah u ducee inuu iisoo wareego dhaqaale iga timid Zambia
Sulaymaan P Agoosto 22, 2020 XXX: 3 pm
Ilaaha qaaliga ahow fadlan i caawi aniga aad baan noloshayda ugu dhibtoonayaa deynta rupees 3lakhs fadlan i caawi Ilaahow.
Maggie Vuma Agoosto 24, 2020 X XXX: 7 am
Allahayow qaaliga ahow maqal qayladayda sidaan ugu dhiiraday inaan u imaado carshigaaga hortiisa maxaa yeelay waxaan ogahay inaad tahay Ilaaha Qaadirka ah oo u soo diray wiilkaaga keligiis ah inuu u dhinto dembiyadayda weligayna waan kuugu mahad naqayaa oo magacaaga ayaan sharfayaa maadaama aad tahay Rabbiga ciidammada. Waxaan kuugu jilba joogsanayaa adiga si aad maqashid qayladayda…
naamala lucy Agoosto 25, 2020 XXX: 9 pm
Allaylehe..waxaan kuugu imid anigoo dembi gala sidaan oo kale. Waxaan ka baryayaa Naxariistaada iyo nimcadaada .adoo ka baryaya faragalintaada dhaqaalaheyga .. Waxaan ka daalay deymaha, waxaan ka daalay saboolnimada, waxaan u baahanahay inaan dib u soo cesho hantideyda maaliyadeed iyo inaan baabi'iyo axdi kasta oo iga hor istaagaya barwaaqada dhaqaale .. aniga in aan ka sara kaco cadaawayaashayda oo aan dib u sheegto maalkeygii oo dhan..waxaan ahay Ciise magiciisa waxaan helay xoolahaygii oo aan dib ugu laabtay kun laab… dabkii gost ee quduuska ahaa A ..Aamiin .. waayo waa la dhammeeyay
Festus Agoosto 25, 2020 XXX: 11 pm
Lawrence Sebtember 19, 2020 Saacaddu markay ahayd 12:58 am
Waad ku mahadsan tahay Man of God, iyo subkid ka sii badan, Nimco korkaaga haysa iyo wasaaraddaada
David Lupenga Oktoobar 3, 2020 saacadu markay tahay 3:29 pm
Ilaah si aad ah buu kuu barakeeyay adiga nin ilaah ah, sii joog barakaysan, waxaan aaminsanahay, waxaan ku helayaa nimco xagga rumaysadka, magaca weyn ee Ciise ee Naasared.
chinedum nzerem Oktoobar 6, 2020 8: 37 am
Waxaan kuhelayaa horumar dhaqaale dhanka MAGACA CIISE
Uche kester Oktoobar 11, 2020 1: 39 am
Waxaan aaminsanahay awooda Ilaaha ugu sarreeya iminkana sidaan u tukado ayuu iigu jawaabay waad ku mahadsan tahay Ciise
Bisola Laasaros Oktoobar 28, 2020 3: 57 am
Ilaaha Qaadirka ah Waan kugu qanacsanahay inaad ajiibtay baryadayda waana ogahay inay wax walba ok ku noqon doonaan noloshayda maaliyadeed magaca weyn ee Ciise Masiix 🙏🙏🙏
Xaasidnimo Oktoobar 31, 2020 3: 50 am
Tilmaam waxtar u leh salaadaha dhaqaalaha ee wax ku oolka ah. Waad ku mahadsantahay wadaagista muujintaada
Catherine ogbeni Febraayo 28, 2021 Saacadu markay tahay 10:17 pm
Tani waa xigasho cajiib ah. Laakiin qaar ka mid ah hoodlum-yada internetka ayaa ku dhajiyay xayeysiin fisqi ah.
Waxaan jeclaan lahaa in la tirtiro mudane.
Naluyima Sumayia Maarso 18, 2021 saacadu markay tahay 9:51 pm
chibueze evarlistus ogbonnaya Abriil 17, 2021 saacadu markay tahay 6:04 am
Kahor dhamaadka bishaan Abriil waxaa la iilagu Magac daray 20,000 # magaca Ciise Aamiin
declan anosike Meey 8, 2021 saacaddu markay ahayd 12:19
Waxaan u baahanahay horumar dhab ah oo dhaqaale,
Godfrey Meey 17, 2021 saacaddu markay ahayd 6:00
talo saarta Ilaahay samatabbixinta, shaqo mucjiso ah, caafimaad qab iyo dhaqaale
Oluwole abayomi stephen Mee 17, 2021 XXX: 7 pm
ILAAHAY baan ku amaanay. Qodobbada salaadda ee waxtarka badan
NILDA LUCIA IBARRA Juun 30, 2021 Markay tahay 9:24 pm
Munawar James Sebtember 15, 2021 Saacaddu markay ahayd 11:50 am
DEG DEG Fadlan xasuuso qoyskeyga Salaadahaaga maalinlaha ah:
Maalin wanaagsan dhammaantiin, waxaan idiinku imanayaa magaca Ciise: magacaygu waa Munawar James Waxaan ka tirsanahay qoys Masiixi ah waxaanan ka imid Pakistan, fadlan u duceeya saboolnimada iyo duruufaha dhaqaale xumo ee qoyskayga, in Ciise Masiix sameeyo wax weyn Mucjiso ii ah maanta iyo xidhitaankii saboolnimadu waxay ka soo burqanaysaa qoyskayga, sababtoo ah saboolnimada iyo dhibaatooyinka maaliyadeed ee aadka u daran waa inaan dareemo ceeb aad u weyn oo ka jirta aaggayaga, fayraska corona waxaan waayey shaqadaydii haddana ma haysto shaqo, lacag mana jiro il dakhli. Fadlan ilaahay dartii u samee Salaad Mucjiso ah aniga iyo qoyskayga.
Mahadsanid. Allaha idin barakeeyo dhammaantiin
Oo haddii wiil / gabadh Ilaah ah ay rabto inay na caawiso, fadlan noo soo dir hadiyadaha jacaylkaaga oo fadlan igala soo xiriir cinwaanka emailkayga:
(Ciise Masiix walaalkaa)
Sabuurradii 86 Aayadihii Aayadda
Qodobbada Salaadda ee Dadka baahan
Sabuurrada 100 micnaha aayadda aayadda
Waxaa laga yaabaa 2, 2020